amayeza lateral - Shijiazhuang YiLing Hospital
Ukuqaliswa lothotho amalungiselelo olusebenzayo TCM:
1) Shenqi Qiangli philisi: It kumanxweme amandla, usinika ukukhubazeka iyathamba, uyayondla kwaye ikhuthaza ijwabu ngokutsha. Isetyenziswa izifo myatrophic ezibangelwa kwamanani ukomelela isifo motor neuron, muscular oluqhubekayo eqatha, myositis ezininzi, Guillain-Barre syndrome, syringomyelia.
2) Qilong Yiqi luthuthu: It kumanxweme amandla, usinika ukukhubazeka iyathamba, ephelisa phlegm kunye eyenza yokurhaxwa. Isetyenziswa dysarthria, isifuba ukubandezeleka kwakunye nokubamba-bamba umphefumlo, dyspnea, ukothuka ngenxa ukuswela qi kunye eninzi phlegm kodwa kunzima ukuba sikhohlele okubangelwa sisifo motor neuron okubangelwa ukuvaleka phlegm kunye imbobo ezivaliweyo.
3) Shenzhe Jiangqi Powder: It usombulula ukuvaleka kwaye kunciphisa reflux. Isetyenziswa dysarthria, ubuthathaka ehlafuna, ukuminxwa nokukhohlela xa esela nokutya, esidleleni equmbile yaye avuza lomoya okubangelwa sisifo motor neuron kwafunyaniswa ukuba kusasazwe amandla kwicala ephosakeleyo kunye isithintelo kunye ukwaliwa.
4) Guishao Pingchan luthuthu: It kumanxweme amandla, usinika ukukhubazeka iyathamba, uyayondla izicwili ngokutsha kunye tonics imicu. Isetyenziswa yokwanda imisipha, imilenze twa buti kunye twitching izicacele izihlunu ezinxulumene kunye nezifo motor neuron.
5) Yilian Qiwei luthuthu: It esusa ubushushu siguqule ngamathontsi. Isetyenziswa izandla umkhuhlane angonwabi neenyawo, benxaniwe ezinobubi incasa, umchamo etyheli, uboya yellow ukubetha imtyibilizi kwaye okukhawulezayo okubangelwa sisifo motor neuron ukuba unesifo kwingxinano kunye ezingaphezu ngamathontsi kunye nobushushu.
6) Zaolian Anshen Powder: It iyawasusa ubushushu, usombulula ukudakumba, kwaye tranquilize ingqondo. Isetyenziswa deprementia, twitching izihlunu, uxinezeleko namaxhala, efuna ukulala dreamful okubangelwa sisifo motor neuron banesifo syndrome ubushushu ezingentle intliziyo nengqondo.
7) Sanhuang Zengli Powder: It kumanxweme amandla, usinika ukukhubazeka iyathamba, komeleza qi kunye ondla igazi. Isetyenziswa isifo motor neuron, muscular dystrophy, myasthenia gravis, sclerosis, nokuba buthathaka kwezihlunu, imilenze iyathamba kunye buti, ubunzima ubunzima bomzimba, nokwehla imisipha okubangelwa scleroderma kwafunyaniswa ukuba ukuswela qi negazi.